गर्मीमा एलर्जीबाट जोगिने सजिलो उपाय, के तपाईलाई थाहा थियो ? – ramechhapkhabar.com
गर्मीमा एलर्जीबाट जोगिने सजिलो उपाय, के तपाईलाई थाहा थियो ?
गर्मी महिना शुरु भएको छ । गर्मीमा करिब १० देखि २० प्रतिशत मानिस मौमसी एलर्जीको शिकार हुन्छन् । यदि तपाई पनि यस्तै एलर्जीको शिकार हुनुहुन्छ भने केही त्यस्ता तरिका अपनाउनुस् जसले तपाईलाई यसबाट मुक्ति दिलाउन सक्छ।
अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानले के पत्ता लगाएको छ भने तनाव लिएको खण्डमा एलर्जीको लक्षण बढ्ने गर्छ । स्ट्रेस हार्मोन्स, ब्लड प्रोटीन इत्यादीले आईजीईलाई बढाउँछ जुन एलर्जिक रिएक्शनका लागि जिम्मेवार हुन्छ । विज्ञका अनुसार तनाव नलिने र पूरै निन्द्रा सुत्ने गर्नाले एलर्जीमा राहत मिल्छ ।
अनुसन्धानका अनुसार यदि तपाईको सुत्ने ओछ्यानलाई १ सय ४० डिग्री फरेनहाइटको तापक्रममा धुनुभयो भने १ सय प्रतिशत धुलो कम हुन्छ । जबकी मनतातो पानीले धुदाँ ६ दशमलव ५ प्रतिशत धुलो मात्रै कम हुन्छ । केही मेसिनमा सेनेटाइज सेटिङ पनि हुन्छ । यदि मेसिनमा यस्तो विकल्प छैन भने वासिङ मेसिनमा तातो पानीको प्रयोग गर्नुहोस् वा हातले कपडा धुनका लागि तातोपानी प्रयोग गर्नुहोस् । कपडालाई मज्जाले सुकाउनुहोस् ।
जसलाई एलर्जीको गुनासो छ त्यस्ता मान्छेले घर छिर्नासाथ नुहायो भने केही आराम मिल्छ । कपडा, जुत्ता, कपाल आदिमा छिरेका भाइरसको सम्पर्कमा आउने एलर्जीको लक्षण शरीरमा आउँछ । त्यसैले जति छिटो सकिन्छ नुहाउनुहोस् ।
काठमाडौं । तपाई वास्तुशास्त्रमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? कहिलेकाहीँ हामीले चाहँदाचाहँदै पनि जीवन सोचजस्तो चाहेजसरी चलाउन मिल्दैन । सम्पूर्ण खर्च लगाउँदा पनि काम बन्नुको साटो बिग्रँदै जान्छ । एकातिरबाट मिलाउँदै गयो अर्कोतिरबाट खस्किँदै जान्छ ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार तपाईले सिरानीमुनि के कुरा राखेर सुत्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि तपाईको जीवनसँग अर्थ राख्छ । यो प्रश्न गरेका धेरैले जवाफमा भन्छन्, ‘मेरो सिरानीमा २, ४ पैसा छ होला’ अनि केही महिलाले जवाफ दिन्छन् – ‘कपाल बाँध्ने रबर’ कतिपयले भन्छन्, ‘सजिलो लाग्ने भएकोले सिरानीमा मोबाईल राखिन्छ ।’ तर त्यसो होइन ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार तपाईले आफ्नो सिरानीमुनि केही महत्वपूर्ण चीज राखेर सुत्दा तपाईको विपत्ति दुर हुन्छ । र, जीवनमा नया नयाँ ढोकाहरु खुल्नेछन् । यसर्थ आजै राम्रो कामको शुरुवात किन नगर्ने ?
राति सुतेको समयमा सिरानीमुनि गीता हुनु राम्रो हुन्छ । राति सुत्ने समयमा सिरानीमुनि मुला राखेर सुत्ने र भोलिपल्ट बिहान उठेपछि उक्त मुला शिवलिंगलाई चढाउनाले राहुको दोष निवारण हुन्छ । कतिपयले हनुमान चालिसा राख्न पनि सुझाएको पाइन्छ । तामाको भाँडामा पानी राखेर बिहान उठ्नासाथ उक्त पानी पिउनुहोस् । बचेको पानीलाई कुनै गमलामा हाल्नाले तपाइको मनोकामना पूरा हुन्छ ।
लसुनमा हुने भोल्टाइल तेलको गन्धले शरीरमा गर्मी पैदा गर्छ । यसले रुघा तथा सर्दीको समस्या हटाउँछ । फलामजन्य उपकरणः तपाईको सिरानीमा फलामजन्य उपकरण राख्नुहोस् ।सिरानीमुनि फूल राख्दा पनि राम्रो हुन्छ । दक्षिण दिशामा शिर अनि उत्तर दिशामा गोडा पारेर सुत्नु सर्वोत्तम मानिन्छ । यदि यसरी सुत्नुभयो भने धेरै बिमारी लाग्न पाउँदैनन् । हामीले दक्षिणतिर शिर पारेर सुत्दा यो ऊर्जा हाम्रो शिरबाट पसेर गोडाको बाटो हुँदै निस्कन्छ ।
पति–पत्नीबीचको सम्बन्धमा छटपट छ भने मंगलवारको राति मुङको दाललाई कुनै हरियो रंगको कपडामा बाधेर सिरानीमुनि राखेर सुत्नुहोस् र बिहान उठेर उक्त कपडा कुनै कन्यालाई दान गनुस् वा दुर्गा मन्दिरमा चढाउनुहोस् ।